🥇 ukubalwa kwamabhizinisi ezikweletu
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 776
Ividiyo yokubalwa kwemali yamabhizinisi esikweletu
Oda ukubalwa kwamabhuku ebhizinisi lesikweletu
Isidingo esikhulayo sabantu semalimboleko siphoqa umnotho wezwe ukuthi wakhe izikhungo ezikhethekile ezikwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinjalo. Ukubalwa kwamabhuku ezimali ezikweletini kufanele kugcinwe ngokuqhubekayo futhi ngokulandelana kwazo ukuze kunikezwe abaphathi imininingwane ephelele. Amafemu anjalo ahloselwe abathengi futhi alungele ukunikeza izinsiza ezahlukahlukene.
Ukubalwa kwezimali kwamabhizinisi okuthenga ngesikweletu kugcinwa ngokuya ngezinkambiso namazinga asunguliwe, abhalwe emithethweni yenhlangano nakweminye imibhalo yokulawula. Izinhlelo ezikhethekile zingenza imisebenzi isebenze ngesikhathi esifushane. Kubalulekile kuphela ukukhetha isoftware efanele ngokulandela imininingwane yomsebenzi.
I-USU Software ingasebenza ezinkampanini ezahlukahlukene, kungakhathalekile ukuthi zinkulu kangakanani imisebenzi yazo. Kwakha ukubikwa kwezimali nokubika kwentela ekupheleni kwesikhathi sokubika. Lokhu kubaluleke kakhulu esikhungweni sezikweletu, njengoba iletha ngokuhlelekile imibhalo ukuze iqhubeke nokuxhaswa ngemali. Izinkomba zezezimali zihlaziywa njalo ngekota ukuqapha izinga lenzuzo, elibonisa ukufuneka kwebhizinisi.
Izinhlangano zezikweletu, zomshuwalense, ezokukhiqiza nezokuthutha zidinga ukubalwa kwezimali okuseqophelweni eliphezulu. Kubalulekile ukuthi bangagcini nje ngokwenza umsebenzi wabo ngokuzenzakalela kepha futhi nokwenza ngcono izindleko. Ukuze ube nokuncintisana embonini, udinga njalo ukuqapha ukusebenza kwemakethe futhi wethule ubuchwepheshe obusha. Njengamanje, ukukhula kwamabhizinisi wesikweletu sekuvele kufinyelela emakhulwini ngonyaka. Izinkampani ezintsha ziyavela noma ezindala ziyahamba. Kukhona izibuyekezo ezingapheli, ngakho-ke kubalulekile ukugcina umunwe wakho ushaya ngamandla.
Umthetho wezwe uvame ukuchibiyela imithetho yokubalwa kwezimali, ngakho-ke udinga ukuvuselela ngokuhlelekile ukucushwa. Ukuze ungakhathazeki ngokubaluleka kwezinkomba, kufanele usebenzise isoftware enjalo ezothola idatha ngokuzimela nge-Intanethi. Lesi sitolo esisodwa sihlukile kulabo esincintisana naso ngoba sisebenzisa izinguquko ku-inthanethi futhi asilulazi umkhiqizo.
Ukubalwa kwezimali emabhizinisini esikweletu ukwakheka okulungile kwemibhalo, imibiko, izincwadi, nomagazini. Ngosizo lwezinhlelo zikagesi, lokhu akuthathi isikhathi esiningi. Izifanekiso ezijwayelekile zokuthengiselana zivumela abasebenzi ukuthi bakhe ngokushesha ukuthengiselana futhi bacubungule izicelo. Lapho ucela imininingwane kubaphathi, umbiko ungathunyelwa nge-imeyili. Le yindlela izindleko zesikhathi ezithuthukiswa ngayo. Izinqolobane ezengeziwe zisetshenziselwa ukuthuthukisa imisebenzi emisha nokuqapha ukufunwa kwemakethe.
I-USU Software eyenzelwe amabhizinisi esikweletu inakekela amakhasimende ayo. Inika amandla noma iyiphi inhlangano. Ngeke usebenze ezweni lakho kuphela kepha nakwamanye amazwe. Ngenxa yenguqulo yesilingo, ungahlola konke ukusebenza ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ukuyithenga, iya kuwebhusayithi yethu esemthethweni, lapho kwethulwa yonke imininingwane efanele mayelana nemikhiqizo yethu. Ngaphezu kwalokho, kukhona oxhumana nabo besazi sethu futhi abasekela i-. Shayela izinsizakalo ezengeziwe zokulondolozwa noma u-ode imikhiqizo emisha bese uhlela ukubalwa kwezimali kwebhizinisi lakho lesikweletu.
Uhlelo lokubalwa kwamabhizinisi wesikweletu yisixazululo esihle kunazo zonke sokuqinisekisa inzuzo yenkampani njengoba inikeza amathuba angenamkhawulo walokho. Ukusebenza kwayo kwekhwalithi ephezulu kudalwe ngongoti bethu, besebenzisa izindlela zokugcina zobuchwepheshe bekhompyutha neziqu zabo. Uhlelo lwethu lungenza ukucubungula okusheshayo kwezinhlelo zokusebenza ezingenayo. Kusiza ngokuphawulekayo umsebenzi wabasebenzi, kukhuphule umkhiqizo wabo nokusebenza kahle, futhi kube nomthelela ekukhuphukeni kwenzuzo ebhizinisini lesikweletu, okuyinzuzo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lokusebenza luqinisekiswa ngezakhiwo nokusebenza okuphezulu, okuqinisekisa ikhwalithi. Ngasikhathi sinye, intengo yesoftware yokubalwa kwemali ayiphezulu futhi ayibizi kuwo wonke amabhizinisi wesikweletu. Le yinqubomgomo yethu ehlukile, ekhombisa isimo sethu esihle kumakhasimende, okwandisa ukwethembeka kwabo nokuzethemba kwethu.
Kunezinye izinto eziningi ezihlinzekwa yi-USU Software, kufaka phakathi imenyu elula, ukwakheka kwesimanje, umsizi we-elekthronikhi owakhelwe ngaphakathi, ukufinyelela ngokungena ngemvume nephasiwedi, ukukhishwa kwemali mboleko, ukwakheka kohlelo lokukhokha, ukubalwa kwemali yokukhokha, ukubalwa kwemali kanye nokubika kwentela, idokhumende amathempulethi ezinhlangano zezikweletu, ezokuthutha nezimboni, ukubalwa kwezimali okwenziwayo nokuhlaziya, isitatimende sasebhange, ukuhambisana nomthetho wezwe, ukukhetha amasethingi ohlelo, ukwakheka kwenqubomgomo yokubalwa kwezwe, izincwadi ezikhethekile zezinkomba kanye nezihlukanisi, kusetshenziswa i-vibe, ukuzimisela ukunikezela nokufunwa, umphathi womsebenzi, ukuthumela izaziso, ukuhlanganiswa nesayithi, ukwakheka kwezicelo nge-Intanethi, ukuthumela okuningi nge-SMS ne-imeyili, ukulawula ukuhamba kwemali, ukukhonjwa kwemali ekhokhwa sekwedlule isikhathi, ukuhlolwa kwekhwalithi yesevisi, ukuphathwa kwenqubo, izitifiketi zokubalwa kwezimali, ukulungiselela amaholo, ishadi lama-akhawunti, ukubalwa kwabasebenzi, ukwenza isipele, isevisi yokuqapha ividiyo lapho iceliwe, idluliswa kususa i-database evela kolunye uhlelo, ukuhlaziywa kwemali engenayo nezindleko, izincwadi ezikhethekile nomagazini, imininingwane eyizethenjwa yangempela, esebenza ngezimali ezahlukahlukene, ukubalwa kwezikweletu, ama-akhawunti akhokhelwayo futhi atholakalayo, ama-oda emali, ama-templates okuposa ama-accounting, ukukhokha okuyingxenye futhi okugcwele, ukuxhumana nokukhokha ama-terminals ngokucela, ukuhlanganiswa nokwaziswa, ukubikwa okunwetshiwe, amanani okubolekisa, ukusetshenziswa ezinkampanini ezinkulu nezincane, nokwakhiwa kwento okungenamkhawulo.